नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर ओरालो लागेको हो? पुस २० गतेसम्म २ सयको आसपासमा रहेको संक्रमितको संख्या २१ गतेबाट दोब्बरले बढ्दै दैनिक रुपमा ह्वात्तै बढेको छ। बढ्दै गएको संक्रमितको संख्या माघ १२ गतेदेखि भने केही कम हुन थालेको छ। आइतबार, माघ १६, २०७८
बढ्यो खोप भण्डारण क्षमता (कुन प्रदेशमा कति?) टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग परिसरमा ८५ हजार लिटर क्षमता भएको केन्द्रीय खोप भण्डार स्टोर निर्माण कार्य भइरहेको छ। केन्द्रीय कोल्ड चेनको क्षमता कम भएपछि अत्याधुनिक र बढी क्षमता भएको भवन बनाउने गरी गृहकार्य सुरु भएको थियो। शुक्रबार, माघ १४, २०७८
नेपालमा कोरोना खोप लगाउन थालिएको एक वर्ष, कुन खोप कहिले कति आयो? स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकका अनुसार २०७७ माघ १४ गते देखि २०७८ माघ १३ गते सम्ममा नेपालमा ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज कोभिडविद्धको खोप नेपाल भित्रिएको छ। ती मध्ये हालसम्म ३ करोड ४ लाख ७५ हजार ५८९ मात्रा खोप लगाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार, माघ १४, २०७८
के कोरोना भाइरस 'स्वाइन फ्लू' र मौसमी रुघाखोकी जस्तै हुनसक्छ? के कोरोना भाइरस छिट्टै अन्त्य हुने अवस्थामै पुगेको हो? के कोरोना भाइरस पनि यसअघि महामारीको रुप लिएर पछि कमजोर बनेका अन्य भाइरस जस्तै कमजोर हुँदै जान्छ त? बिहीबार, माघ १३, २०७८
कोरोना भाइरस: प्राकृतिक रूपमा बन्ने ‘एन्टिबडी’ र खोपमा कुन बढी प्रभावकारी? संक्रमण नभएका र खोप लगाएकाभन्दा खोप नलगाएका तर पहिले संक्रमित भएकाहरूमा यो भेरियन्टले कम असर गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। पुर्वसंक्रमितमा शरीरले नै कोरोना भाइरससँग लड्ने ‘एन्टिबडी’ बनाउँछ। मंगलबार, माघ ११, २०७८
कोरोना भाइरसबारे चीन र क्यानडाबीच नयाँ विवाद, के ओमिक्रोन चिठीबाट पठाउन मिल्छ? चीनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले क्यानडाबाट पठाइएको संक्रमित चिठीबाट बेइझिङमा ओमिक्रोन प्रवेश गरेको दाबी गरेका छन्। तर, क्यानडाका स्वास्थ्य विज्ञहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। आइतबार, माघ ९, २०७८
पूर्ण मात्रा खोप पाएका स्वास्थ्यकर्मीमा किन बढ्दैछ कोरोना संक्रमण? त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगायतका ठूला अस्पतालहरुले वार्डहरु मर्ज गरेर कम स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने नीति लागू गरिसकेको जनाएका छन्। बिहीबार, माघ ६, २०७८
डेल्टाक्रोन: कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट कि प्रयोगशालाको त्रुटि? नेपाललगायत देशमा दोस्रो लहर आउँदा ‘डेल्टा’ भेरियन्टका संक्रमितले अस्पताल भरिएका थिए। तर, ओमिक्रोनलाई डेल्टा जति खतरनाक भने मानिएको छैन। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरियन्टको म्युटेसन भयो भने के होला त? सोमबार, माघ ३, २०७८
भाइरसको ‘एस जिन नेगेटिभ’ भनेको के हो? ओमिक्रोन संक्रमितमा किन यो जिन नेगेटिभ आउँछ? एस जिन भनेको भाइरसको बाहिरी सतह हो। जिन सिक्वेन्सिङमा एस जिनमा कहाँ म्युटेसन भएको छ भनेर हेरिन्छ। भाइरसमा हुने यही म्युटेसनका कारण नै डेल्टा, ल्याम्डा, अल्फा जस्ता भेरियन्ट देखिएको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी गुप्ताले बताए। शुक्रबार, पुस २३, २०७८
बुस्टर डोजः किन र कहिले लगाउने? फरक खोप लगाउन मिल्छ? कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको ६ महिनापछि शरीरमा क्रमशः एन्टीबडी कम हुँदै जान्छ। जसले गर्दा शरीरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः बढ्दै जाने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले बताए। त्यही जोखिमलाई कम गर्न ‘बुस्टर डोज’ को आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्। बिहीबार, पुस ८, २०७८
नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलने जोखिम कति? किन खतरा छ? भारतमा फैलिरहेको ओमिक्रोनको संक्रमणलाई मुख्य आधार मान्दै सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन नेपाल पनि यसको जोखिममा धेरै मात्रामा रहेको बताउँछन्। नेपाल भित्रै ओमिक्रोन फैलने भन्दा पनि भारतबाट यसका संक्रमित भित्रने हो की भन्ने उनको अनुमान छ। शुक्रबार, पुस २, २०७८
नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्टः अब के गर्न आवश्यक छ? नयाँ भेरियन्ट देखिएका कारण अब सरकारका तर्फबाट के गर्न आवश्यक छ त? यस्तै नागरिकले पनि के के कुरामा ध्यान दिने त? मंगलबार, मंसिर २१, २०७८
जीन सिक्वेन्सिङबाट कसरी पत्ता लगाइन्छ ओमिक्रोन भेरियन्ट? कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउने विधि हो, जीन सिक्वेन्सिङ। भाइरसको जेनेटिक (आणुवांशिक) बनावटलाई डिकोट गर्ने परीक्षण नै जीन सिक्वेन्सिङ हो। मंगलबार, मंसिर २१, २०७८
ओमिक्रोन भेरियन्टका विषयमा ५ प्रश्न र उत्तर ओमिक्रोन भेरियन्ट कोभिड-१९ को सबैभन्दा पछिल्लो भेरियन्ट हो। यो भेरियन्ट सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टी भएको थियो भने अहिले यो भेरियन्ट नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा देखिएको छ। सोमबार, मंसिर २०, २०७८
‘संक्रमितको संख्यामा आउने उतारचढावलाई सरकारले नियाल्नुपर्छ’ सरकारले अब कोरोना संक्रमितको संख्यामा आएको उतारचढावलाई नियाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसमा पनि कस्ता खालका व्यक्तिहरु कुन अवस्थामा संक्रमित भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। सोमबार, मंसिर २०, २०७८
नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबारे किन फैलिरहेछ त्रास? विज्ञहरु किन चिन्तामा छन्? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले ओमिक्रोनलाई ‘चिन्ताको विषय’ भएको जनाएको छ। भेरियन्टबारे धेरै जानकारी नभए पनि यसले विश्वव्यापी रुपमा पार्ने जोखिम उच्च रहेको बताइएको छ। सोमबार, मंसिर २०, २०७८
नेपालमा बुस्टर डोज लगाउने बेला आएको हो? हालसम्म नेपालमा रहेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोज बारे कुनै निर्णय गरिनसकेको उनले बताए। डब्लुएचओले पनि बुस्टर डोज सबैले नभई जोखिम हेरेर लगाउन सकिने मात्र भनेको उनले बताए। शनिबार, मंसिर १८, २०७८
अध्ययन: ओमिक्रोन भेरियन्टबाट फेरि संक्रमित हुने दर डेल्टा र बिटा भन्दा ३ गुणा बढी यस रिसर्च एक मेडिकल वेवसाइटमा प्रकाशन गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तर, अहिलेसम्म कसैले पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि गरेको छैन। तर, साउथम्पटन युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक माइकल हेडले 'उच्च गुणवत्ता' को लागि यस रिसर्चको तारीफ गरेका छन्। शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८
ओमिक्रोन भेरियन्ट: डेल्टाभन्दा तीन गुणा बढी म्युटेसन, कत्तिको घातक? ओमिक्रोन भेरियन्टको बाहिरी सतहमा रहेको स्पाइक जीनमा ३२ वटा म्युटेसन अर्थात् उत्परिवर्तनहरु देखिएको सुक्ष्म जीवाणु विज्ञ डा सन्तोष दुलाल बताउँछन्। बिहीबार, मंसिर १६, २०७८
ओमिक्रोन भेरियन्ट कति घातक छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान हुँदैछ : डब्ल्यूएचओ ओमिक्रोनलाई यसअघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि खतरनाक र चिन्ताजनक भेरियन्ट भनिएको छ। प्रारम्भिक प्रमाणहरूले उक्त भेरियन्टमा यसअघिका भाइरसहरुमा भन्दा पनि संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बताइएको छ। सोमबार, मंसिर १३, २०७८
के नेपालमा जीन सिक्वेन्सिङ गरेर कोरोनाको ओमीक्रोन भेरियन्ट पत्ता लगाउने व्यवस्था छ? कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरियन्ट नेपालमा देखिएको छ वा छैन? नयाँ संक्रमितमा यो नयाँ भेरियन्टको संक्रमण हो वा होइन? भनेर नेपालमा पत्ता लगाउन सकिने व्यवस्था छ त? आइतबार, मंसिर १२, २०७८
दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोन नेपाल भित्रने जोखिम कति? प्रत्यक्ष रुपमा नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोन नेपाल भित्रने जोखिम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएसम्म नयाँ भेरियन्ट भित्रने जोखिम सधैँ रहने उनले बताए। शनिबार, मंसिर ११, २०७८
कोरोनाको नयाँ भेरियन्टलाई डब्लूएचओले 'ओमीक्रोन' नाम दियो, डेल्टाभन्दा खतरनाक हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) ले दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टलाई ओमीक्रोन नाम दिएको छ। यो भेरियन्टको म्युटेसन डेल्टाभन्दा खतरनाक हुनसक्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। शनिबार, मंसिर ११, २०७८
दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला, डेल्टाभन्दा खतरनाक हुनसक्ने चेतावनी दक्षिण अफ्रिकाको सेन्टर फर एपिडेमिक रोस्पोन्स एन्ड इनोभेसनका निर्देशक प्राध्यापक टुलियो डी ओलिवेराले नयाँ म्युटेसनलाई ‘म्युटेसनको असामान्य समूह’ भनेका छन्। शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८
सन्तानलाई खोप लगाउन पाउँदा आमाहरुको खुशी १२ वर्ष माथिका आठ प्रकारका दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले फाइजर खोप लगाउन सुरु गरेको हो। यो खोप अभियान मंसिर ४ गतेसम्म चल्नेछ। खोप लगाउनका लागि सरकारले देशभर २४ वटा खोप केन्द्र तोकेको छ। आइतबार, कात्तिक २८, २०७८